बेलकालाई नेपालकै नमुना नगर बनाउँछौं : दिपक दंगाल | NewsKarobar
गृहपृष्ठ बेलकालाई नेपालकै नमुना नगर बनाउँछौं : दिपक दंगाल
बेलकालाई नेपालकै नमुना नगर बनाउँछौं : दिपक दंगाल
स्थानीय तह १५ वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो । जनप्रतिनिधि नभएकै कारण विकास निर्माणका काम पछि परेको तथा अनियमितता र भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढेका आवाजहरु बुलन्द भए । १५ वर्षपछि २०७३ सालमा स्थानीय तहमा ‘सिंहदरबारका अधिकार’ सहित जनप्रतिनिधि आए । अहिले जनअपेक्षाविपरीत कतिपय स्थानीय तह नै अनियमितता र भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएका छन् । अझै पनि रोजगारीका लागि युवाशक्ति बाहिरिन बाध्य छ । उदयपुरको बेलका नगरपालिका–४ का अध्यक्ष दिपक दंगाल विदेशी भूमिमा पसिना बगाइसकेका जनप्रतिनिधि हुन् । नगर र वडाको विकास, विकाससँग जनताको सम्बन्ध, स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जनाका लागि बेलका नगरपालिकाले के गरिरहेको छ ? यिनै विषयमा सञ्जय श्रेष्ठले वडाध्यक्ष दंगालसँग गरेको कुराकानी :
स्थानीय निर्वाचनपछि तपाईहरुलाई भोट दिँदा मतदाताको जे अपेक्षा थियो, ती अपेक्षा कति पूरा हुँदैछन् ?
स्थानीय निर्वाचनमा हामीले जे गर्न सक्थौं त्यति मात्र भनेका थियौं । हामीले जति बोलेका छौं, त्यही रफ्तारमा विकास निर्माणको काम पनि भइरहेका छन् । हामीले अहिले बेलका नगरपालिका र मेरो वडामा पनि प्रत्यक्ष जनताको जीवनसँग जोडिएर विकासका कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं । मोटरबाटो, बिजुलीका साथै कृषिक्षेत्रका कामलाई हामीले जनअपेक्षाअनुरुप अगाडि बढाइरहेका छौं । मेरो वडामा बाटो नपुगेको टोल छैन, बिजुली पुगिसकेको छ, खानेपानी एक घर एक धारा अभियानमा अगाडि बढेका छौं । स्वास्थ्य चौकी निर्माण, वडा कार्यालय भवन निर्माण र शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यार्थीलाई उत्साहित गर्न टिफिन बक्स वितरण गरेका छौं । निर्वाचनका बेला जे प्रतिबद्धता थियो, त्यहीअनुरुप काम गरिहेका छौं ।
त्यसो भए जनताको अपेक्षा र तपाईंहरुको कार्यशैलीबीच सामञ्जस्य छ ?
जनताको अपेक्षा त एकपछि अर्को बढ्दै जान्छ । तर, हाम्रो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म हामीले जनताको अपेक्षालाई लत्याएका छैनौं । जनताको अपेक्षा र चाहनालाई सम्मान गर्दै हामी काम गरिरहेका छौं ।
जिम्मेवारी पाएको दुई वर्षको अवधिमा तपाईंको नगर र वडामा विकासका कस्ता दीर्घकालीन आधारहरु खडा गर्नुभयो ?
हामीले गुरुयोजना बनाएर काम गरेका छौं । जनताको अपेक्षाअनुरुप काम गर्नका लागि नै गुरुयोजना निर्माण गरेका हौं । विकासलाई जनजीवनसँग जोडेर अघि बढाएका छौं । रोड खनेर एसीवाला गाडी गुड्दै गर्दा त्यो गाडीमा हाम्रा जनता चड्न सक्छन् कि सक्दैनन् यसमा पनि ध्यान दिएका छौं । जनताको आर्थिक अवस्था सम्पन्न बनाउन कृषिक्षेत्रमा जनतालाई जोडेका छौं । सम्भावित उद्योग स्थापनामा जोड दिएका छौं । पर्यटन उद्योगको विस्तारमा लागेका छौं । कृषिमा अनुदान, उद्योगमा अनुदानलगायतका काम अघि बढाएका छौं । हाम्रो नगरभित्र उत्पादित सबै उत्पादन नगरले नै खरिद गर्ने गर्छौं । यसरी हामी जनतालाई विकास र विकासलाई जनतासँग जोड्दै अगाडि बढेका छौं । जनतालाई उत्पादनसँग जोड्नका लागि नगर र वडा कार्यालय आफैंले लगानी गरेका छौं । विभिन्न सीपमूलक कामको तालिम दिएका छौं । एक व्यक्ति एक सीपको अवधारणामा अगाडि बढेका छौं । विकास गर्दै गर्दा हामीले भूगोलको अवस्था, जनताको आर्थिक अवस्था र विकासको दीर्घकालीनतालाई ध्यान दिएका छौं ।
बेलका–४ र समग्र नगरपालिकाले विकास योजनाको छनोट र कार्यान्वयन कसरी अघि बढाउनुभएको छ ?
हामीले कुनै पनि योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्दा विषय विज्ञहरुसँगको छलफलबाट गर्ने गरेका छौं । विकास गर्दा विनास नहोस् भन्ने हेतुले काम गरिरहेका छौं । हाम्रोमा जनप्रतिनिधिबीच मतैक्य छ । कुनै एक जनाको अभावमा विकास निर्माण र जनताको काम रोकिँदैन । वडा र नगरको संयोजनमा काम भएको छ । हामी एकरुपताका साथ अगाडि बढिरहेका छौं । आजको युगमा हामीले सूचना प्रविधि र यन्त्रहरुको प्रयोगलाई पनि विशेष ध्यान दिएका छौं ।
स्थानीयले त योजना छनोटमा पनि जनप्रतिनिधिकै क्षेत्र प्राथमिकतामा परे भन्ने गुनासो गरेका छन् नि ! किन हुन्छ यस्तो ?
अरु नगरपालिका र वडामा के छ, त्यो मलाई थाहा भएन तर मेरो वडामा र हाम्रो बेलकानगरमा यस्तो छैन । यो कुरामा म सहमत छैन । म मेरो वडाको सेन्टरमा छु । मैले विकास गर्दा कुनै पनि क्षेत्र विशेषलाई भन्दा पनि समग्र वडालाई ध्यानमा राखेको छु । किनकि, जनताको चाहना र आवश्यकता नै हाम्रो प्राथमिकता हो ।
काम गर्ने सिलसिलामा देखिएका चुनौती के हुन् ?
अहिलेको परिस्थितिमा जनताका अपेक्षा धेरै छन् । हामी देशमा संघीयता कार्यान्वयनको फेजमा छौं । फागुन २१ गतेसम्ममा सबै कानुन निर्माण भइसक्छन् । कानुन निर्माण भएपछि जनतालाई अनुभूत हुने गरी काम गर्ने चुनौती हामीसामु थपिन्छ । हामीले जनतालाई आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम बनाउने काम छन् । असहाय मानिसलाई व्यवस्थापन गर्न र बेरोजगार जनशक्तिलाई उत्पादनमा जोड्नु छ । नयाँ–नयाँ आर्थिक क्षेत्रको पहिचान गर्नु छ ।
तपाईं युवा जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, अहिले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम लागू हुने चरणमा छ, कृषिका पनि विभिन्न परियोजना अघि बढेका छन्,अब युवालाई स्थानीय स्तरमै काम गर्ने वातावरण बनाउन तपाईंको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीमा गएको मेरो अनुभव पनि छ । अब युवा पलायनलाई रोक्नुपर्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारले अब देशमा कुन ठाउँमा के सम्भावना छ । त्यसको पहिचान गर्नु आवश्यक छ । त्यस क्षेत्रलाई प्रोमोट गर्नु आवश्यक छ । कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति निर्माणमा लाग्न आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकारले अहिलेसम्मको अवधिमा के गर्नुपथ्र्यो, के हुँदै छ ? जनताले स्थानीय सरकार हुँदा र नहुँदाको फरक त पाउनुपर्ने होला नि !
मुलुक संघीय संरचनामा गयो । १५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहमा अहिले जनप्रतिनिधि छन् । जनताका काममा सहजता आएको छ । प्रत्येक जनताका घर–घरमा जनप्रतिनिधि आफैं पुगेर काम गरिरहेका छौं । हामी सरकारी कर्मचारीभन्दा फरक हौं । हामी जनताको सेवामा एकचित्त भएर लागेका छौं । नेपालकै एक नमुना नगरको रुपमा विकास गर्न लागिरहेका छौं । जुन र जे कुरा गर्दा जनतालाई सुविधा हुन्छ । हाम्रो ठाउँको विकास हुन्छ, ती कुरा पहिचान गरेर अघि बढिरहेका छौं । बेलका–४ र सम्रग बेलकाका जनतालाई मेरो के आग्रह छ, भने हामी तपाईंहरुले भोट दिएर अनुमोदन भएका तपाईंकै प्रतिनिधि हौं । हामीले गरेका सबै काम जनताको पक्षमा हुन्छ, हामीलाई साथ र सहयोग दिनुहोला ।
बेलका समृद्धिका आधार के–के हुन् ?
बेलका समृद्धिको आधार भनेको कृषि, पर्यटन, होटल र उद्योग हो । हामी अहिले यी तीन आधारलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेका छौं । पर्यटनका नयाँ–नयाँ सम्भावनालाई अध्ययन गरेर अघि बढिरहेका छौं । प्याराग्लाइडिङ र होटलका नयाँ–नयाँ सम्भावनालाई अगाडि ल्याइरहेका छौं । धार्मिक क्षेत्रलाई विकास प्रोमोट गर्नेलगायत काम गर्न आवश्यक छ ।
पछिल्लाे - घुससहित नगरपालिकाका सब इन्जिनियर पक्राउ
अघिल्लाे - घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन गर्न काठमाडौंमा व्यापार महोत्सव हुने